Fitsipika momba ny tsiambaratelo | Pharmacy RXS
Fitsaboana fanafody tsy fahitan-tory - Misy vokany lehibe kokoa noho izany ve ny risika?
Enga anie 01, 2021
Fanasitranana voajanahary ho an'ny tsy fahitan-tory
Aprily 09, 2021
Ny tantaran'ny fanafody fanoherana ny tebiteby
Aprily 07, 2021
Aprily 10, 2020 2020-04-10 4:55
Ity Politika momba ny tsiambaratelo ity dia ampiharina ho an'ny rehetra izay tafiditra amin'ny fisoratana anarana sy ny fidirana an-tsekoly ao amin'ny foibem-pampianarana MaxCoach Online Course.
1 Fahafahana tranokala
3 Adidin'ny orinasa
4 Lalàna mifehy sy toerana
Fantatry ny mpikambana fa mety miteraka fahatarana ny fifamoivoizana data amin'ny alàlan'ny Internet
mandritra ny fampidinana fampahalalana avy amin'ny tranokala ary arak'izany dia tsy tompon'andraikitra amin'ny fanemorana izay mahazatra amin'ny fampiasana Internet izany.
Ny mpikambana dia nanaiky ihany koa ary manaiky fa tsy ho hita mandritra ny efatra amby roapolo ora ny tranokala noho ny fahatarana toy izany, na ny fahatarana vokatry ny fanavaozana, fanovana, na fikojakojana mahazatra ny tranokala.
Ny làlana an-tserasera dia an'ny orinasa ary arovan'ny zon'ny mpamorona amerikanina sy iraisam-pirenena, zon'ny mpamorona, patanty, tsiambaratelon'ny varotra ary lalàna mifehy ny fananana ara-tsaina na momba ny zon'ny tompona.
Tsy misy zon'ny, lohateny na tombontsoa ao na amin'ny làlana an-tserasera na amin'ny ampahany ao aminy, afindra amin'ny mpikambana rehetra, ary ny zony rehetra izay tsy nomena mazava eto dia natolotry ny orinasa.
Ny anaran'ny orinasa, ny logo an'ny orinasa, ary ny anarana mifandraika amin'izany, ny logo, ny anaran'ny vokatra sy ny serivisy, ny endrika
ary teny faneva, dia mari-pamantarana an'ny orinasa. Ny mpikambana dia tsy afaka mampiasa marika toy izany
tsy misy alalana voasoratra mialoha an'ny orinasa.
Ny orinasa dia hampiasa ezaka ara-barotra azo atao mba ahafahan'ny làlana an-tserasera azo idirana, afa-tsy ny fikojakojana voalahatra sy ny fanamboarana takiana, ary afa-tsy ny fanelingelenana vokatry ny antony tsy voafehin'ny orinasa, na tsy takatry ny saina mialoha ny orinasa.
Lalàna mifehy sy toerana
Ireo fehezan-dalàna momba ny serivisy ireo dia adika sy fehezin'ny lalàn'i Etazonia.
Raha misy amin'ny fepetra rehetra, na amin'ny ampahany na amin'ny ampahany, ny fifanarahana dia lasa na lasa tsy manan-kery na tsy azo ampiharina, dia tsy hanimba ny fatra sisa tavela ao.
Daty mahomby: 01/01/2020